Madaxweynaha Puntland oo ka horyimid qaabkii loo magacaabay Guddoomiyaha Bankiga Dhexe
Sagal Radio Services • News Report • April 28, 2019
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa markii u horeysay dhaliil u jeediyay dowladda Federaalka, isagoo sheegay in xadgudub lagu sameeyay qaabka awood qeybsiga ee ku saleysan dhinaca xilalka.
Puntland oo ka mamnuucday deegaanadeeda inay soo galaan Mas’uuliyiinta dowladda Federaalka
Sagal Radio Services • News Report • December 29, 2018
Wasaaradda Amniga Puntland ayaa soo saartay amaro ku aadan sugida amniga inta lagu guda jiro doorashada, iyadoo ka mamnuucday deegaanadeeda inay soo galaan Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin C/llaahi Cumar Camey ayaa ka laabtay dacwad uu ku soo oogay Madaxweyne Gaas, kaddib khilaaf ka dhashay Guddiga xalinta Khilaafaadka iyo ansixinta Golaha Wakiilada.
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dadka reer Puntland ay wajahayaan dhibaatooyin kaga imaanaya labo Cadaw oo is baheysanaya.
Ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa shalay oo jimco aheyd dib ula wareegay deegaanka Af-urur oo qiyaastii ku dhowaad 70KM u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Madaxweynaha Puntland oo magacaabay Wasiir iyo Wasiir ku Xigeen
Wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa lagu magacaabay Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo wasiir ku xigeenka wasaaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland.
Maamul goboleedka Puntland oo soo dhoweeyay magacaabista Ra’iisal wasaare Cumar Cabdrashid
Sagal Radio Services • News Report • December 18, 2014
Maamul goboleedka Puntland ayaa si diiran u soo dhoweeyay magacaabista uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay Cumar C/Rashid Cali Sharmar’arke inuu noqdo ra’iisal wasaaraha Soomaaliya.
Baarlamaanka Puntland oo u yeeray M/weyne Gaas
Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa Warqad u qoray Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali”Gaas” iyo Golahiisa Wasiirada Puntland si ay u horyimaadaan Golaha Baarlamaanka,iyadoona wax laga weydiindoono waxyaabaha u qabsoomay Xukumadda Puntland.
Puntland oo ka hadashay khilaafka soo kala dhex galay madaxda Federaalka
Golaha Wasiirrada Puntland ayaa shir aan caadi ahayn oo ay xalay isugu yimaadeen kaga hadlay khilaafka soo kala dhex galay labada mas'uul ee ugu sarreeya Dowladda Federaalka Soomaaliya.